Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. George Crytone Mkondiwa as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Malawi to the Republic of the Union of Myanmar with residence in New Delhi – Ministry of Foreign Affairs
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. George Crytone Mkondiwa as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Malawi to the Republic of the Union of Myanmar with residence in New Delhi.
Mr. George Crytone Mkondiwa gotaMaster Degree in Development Studies from Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands in 1983 andaBachelor degree in Public Administration from University of Malawi, Chancellor College, Zomba, Malawi in 1977.
He served as Chief Training Officer of the Department of Personnel Management and Training, Office of the President and Cabinet from 1989 to 1990. H​e also served as Director of Administration of the Ministry of Foreign Affairs from 1993 to 1996 and as Deputy Secretary of the Ministry of Energy and Mining from 1996 to 1997. He also served as Chief Secretary to the Government of the Office of the President and Cabinet from 2014 to 2016.
Dated, 13 August 2018
နယူးဒေလီမြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော မာလာဝီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် Mr. George Crytone Mkondiwa အား ခန့်အပ်ရန် မာလာဝီနိုင်ငံအစိုးရ၏ အဆိုပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Mr. George Crytone Mkondiwa သည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် မာလာဝီတက္ကသိုလ်၊ Chancellor College မှ ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ Insittute of Social Studies မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလေ့လာမှုပညာ မဟာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
Mr. George Crytone Mkondiwa သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အထိ သမ္မတနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဌာန၌ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ စွမ်းအင်နှင့် သတ္တုဝန်ကြီးဌာနတွင် ဒုတိယအတွင်းဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ သမ္မတနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်။